Waa Maxay Jiis The Best Europe leeyahay in ay bixiyaan | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Waa Maxay Jiis The Best Europe leeyahay in ay bixiyaan
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 24/04/2020)
Waa xaqiiqo ah oo aad u fiican u yaqaan in Europe waa kan ugu fiican caga waayo, cheese tayo leh. Oo sidii lover jiis ah, laga yaabaa inaad rabto in aad ogaato taas oo cheese ugu fiican Europe leeyahay in ay bixiyaan iyo sida loo heli.
Nagu soo biir maadaama aan dhex liiska xabbadood ee ugu fiican oo ugu dabaal Yurub. Waxaannu Muujin kuwaas oo meelo caan ku yihiin xabbadood ee gaarka ah. Waxa kale oo aanu uga wada hadlaan sidii si ay u gaaraan meelaha kuwaas oo ku haboon iyo in style tareen si aad cheese Yurub safarka mid aad waligey illoobi doonin.
Switzerland guriga waa in ka badan 450 noocyo ka mid ah farmaajo oo ka mid ah farmaajo ugu fiican Yurub waa. Its taariikhda hodanka ah in farmaajo u Yimaaddo Midkood lahayn ee lama filaan ah tan Switzerland ayaa caan ku ah inay si siman oo cajiib ah marka ay timaado in ay caanaha. Thanks to Switzerland ayaa cajiib ah Buurta, Daajiya Xoolihiinna on cusub, cows nadiif ah. sac Grass-quudin soo saaro caanaha ugu fiican taas oo ka dhigaysa xitaa xabbadood more flavorful.
Soos The raaxaystay fudud laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah xabbadood ee Swiss ugu caansan. Waxaad ka heli doontaa cadibo soos asalka ah ee Cheese Emmentaler Factory Schaukaeserei. Switzerland sidoo kale waa halka aad ka heli doonaa warshadaha cheese farxad in gubtay dhigi, dhagax adag, Cheese Green, Ri ee Milk Ricotta, Bregaglia, iyo Buffalo moosarellada.
Waxaad badan ka heli kartaa jiiska Swiss ugu fiican ee mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Switzerland sida Geneva, Zurich, ama Basel. Waxaad gaari kartaa magaalo qurux badan tareen magaalooyinka kale ee waaweyn ee Yurub sida Paris, Berlin, ama Rome. Inay u yimaadaan si ay tuulooyinka yaryar famously loo yaqaan isha ka mid ah kuwan xabbadood wanaagsan, waxaad qaadan kartaa laba tareenada, mid ka mid ah in magaalada weyn oo kale si ay u gaaraan magaalooyinka.
Marka aad ka fikirto cheese fiican Europe ayaa in ay bixiyaan aad si toos ah u malaynayso of xabbadood ee French, Shaki kuma jiro Brie ee shiidan iyo Camembert ganaax maskaxda ku soo. Si kastaba ha ahaatee, France waxaa sidoo kale loo yaqaan for its Roquefort hodan, laga yaabaa in mid ka mid ah xabbadood ee qadiimiga ah ugu. cheese Tani waa kuwa la dhadhan ah helay.
France ayaa sidoo kale hoy u tahay Boursin, jiis ah shiidan oo la jecel yahay by dabaakhyo badan maadaama ay si qurux badan lagu daro galay suxuunta. Chèvre waa cheese kale caan Faransiis. Waa cheese caanaha riyaha ee la texture ah in ay ku xiran tahay da'da farmaajada; wayn waa, ayaa in ka badan acrid iyo hodan ay joogtona. Tomme de Savoie waa cheese caanaha lo'da adag ee la Subag ah midab-gudaha iyo sicir- brown.
Baro, kuwaas oo xabbadood ee flavourful Faransiis adigoo booqanaya magaalooyinka aad ugu jeceshahay Faransiis. Tareenka in Paris, Lyon, Marseille, iyo magaalooyinka kale ee France ka inta badan magaalooyinka waaweyn ee Yurub. Sida lover jiis ah, xitaa laga yaabaa in aad rabto in aad soo booqato ah farmhouses halkaas oo dadka deegaanka ka dhigi xabbadood ee ugu. Kuwani waa si fudud Ieexdo sii socdo oo aad mar aad gaaray magaalooyinka waaweyn tareen.
Amsterdam ilaa Lyon waxaa qoray Train
Farmaajada Ugu Fiican Europe – Italy
cheese ugu fiican Yurub waxaa laga helaa Italy, mid ka mid ah soo saarayaasha cheese ee aduunka ugu weyn ee dunida oo dhan. Qaar ka mid ah xabbadood ee ugu caansan dunida oo dhan waa Talyaani. Yaa aan maqlay moosarellada, Parmigiano-Reggiano, iyo Ricotta? xabbadood ee kale ee dunida-caan in jeedaan Italy waa Gorgonzola, Mascarpone, Provolone, iyo Pecorino. Kuwani xabbadood ee gudaha laga soo saaro yihiin tayada sareeya iyo sida loo isticmaalo cuntada dhaqanka.
Talyaaniga ayaa aad u jecel xabbadood ee ay wax badan in ay leeyihiin cheese fiican ciidaha Europe waa qayb ka mid ah dhaqanka. Mid ka mid ah ciidaha cheese ugu weyn waa Festival ee Jiis Bra in Piedmont. Sicily dabaal "Festival Of Jiis Ricotta” ama Ricotta iyo Jiis Dabaaldag sannad kasta. Head in Tuscany on Sunday ugu horeysay ee September iyo dabaal Festival Jiis Pecorino la maxalliga ah.
Olbia in Tareenadu Cagliari
Cagliari in Tareenadu Olbia
Sassari in Tareenadu Olbia
Olbia in Tareenadu Sassari
Tareenka si ay u Rome, Florence, Milan, Naples, iyo magaalooyin kale oo waaweyn muunad cheese ugu fiican Europe toos ah uga soo saarayaasha ugu, Save A tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cheese-europe%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / fr ama / de iyo luuqado badan.
#cheese #Cheeze Cuntada safarka travelfrance travelitaly travelswitzerland